ऐश्वर्या जस्तै सुन्दरी ! धेरैले ऐश्वर्या नै ठाने, को हुन् त उनी ? हेर्नुहोस्
October 3, 2020 2079
बलिउडमा एक छत्र राज गरेकी चर्चित नायिका हुन् ऐश्वर्या राय बचन । उनि बलिउडकी एक सफल नायिक समेत रहे’की छिन् । उनको जन्म १ नवम्बर १९७३ को मैंगलूर, कर्ना’टकमा भएको हो । उनले फिल्म प्यार हो गया बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी हुन् ।
पहिलो फिल्म में बनी जिसे बाट नै उनको करीयर शुरु भएको हो । उनले हाल सम्म धेरै फिल्म’मा अभि’नय गरीसकेकी छिन् । हिन्दी, मराठी, अंग्रेजी और तमिल भाषामा समेत अभि’नय गरे’की उनले आफ्नो पढा़ई साथ साथै मोडलिग समे’त गरेकी थिइन् । १९९४ मा राय विश्व सुन्दरी प्रति’योगिता जितेकी थिइन् ।
उनि संसारको सबै’भन्दा सुन्दर महिलाको पहिलो नम्बरमा पर्छिन् अमिताभ बच्चनकी बुहा:री समेत रहेकी उनको एक वर्षमा ल’गभग ३५ मिलियन डलर कमा’उछिन् ।उनि अभिनय मात्र नभई सुन्दरताको कारण पनि चर्चामा हुने गर्दछिन् । ऐश्व’र्या विश्वकै सुन्दर नायिका’हरुको सूचीमा परेकी छिन् ।
उनको आँखा:मा धेरैको नजर जाने गर्दछ । र उनको आँखा एकदमै सुन्दर रहेका छन् । बलिउ:डमा सुन्दर आँखा हुनेमा राधिका आप्टे, यामी गौतम, सेलिना जेटली पनि पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै ब:लिउडमा उनि जूतै दुरुस्तै अ:र्किे ना’यिकाको तस्विर सामा:जिक संजमालमा भाइरल भएका छन् ।
उनि जस्तै अर्किे नायि’का स्नेहा उलालले पनि चलचि’त्रमा अभिनय गरिस’केकी छिन् । उनलाई अभि’नेता सलमान खानले सुन्दरताकै कारण चलचित्र ‘लक्कीस् नो टाइम फर लभ’मा अभिनय गर्ने मौ’का दिएका थिए ।
Prevआज उपत्यकाका यि – यी स्थानमा बत्ति जाने ! हेर्नुहोस्
Nextमेरी छोरीको ज्यान लिनेलाई जेलमा सडाएमात्रै छोरीले न्याय पाउँछे भन्दै रोइरहन्छन् सम्झनाका बुवा
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (108350)